တမလွန်ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ရှဲဒိုးကိုယ်စား ရှဲဒိုးရဲ့သားလေးအတွက် စေ့စပ်တောင်းရမ်းပေးခဲ့တဲ့ ကောင်းကျော်၊ ထက်ထက် နဲ့ ဝိုင်းချစ်
တချိန်တုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ရွှေညီအစ်ကို လူရွှင်တော် အဖွဲ့ဟာ ပရိသတ်တွေကို ပျင်းရိစိတ်ညစ်စရာတွေကနေ ကင်းဝေးအောင် ဟာသပြက်လုံးကောင်းကောင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြတာပါ။ ကောင်းကျော်၊ ငြိမ်းချမ်း၊ ရှဲဒိုး၊ ဝိုင်းချစ်၊ ထက်ထက် တို့ (၅) ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရွှေညီအစ်ကို အဖွဲ့ဟာ အောင်မြင်မှုအထွဋ်အထိပ်ထိရောက်အောင် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ သူတို့အဖွဲ့လေးဟာ သက်တမ်းနုနုလေးမှာပဲ ကွဲသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လူရွှင်တော် ရှဲဒိုးကတော့ အဖွဲ့ကြီးကွဲသွားပြီးနောက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူရွှင်တော်ကြီး ရှဲဒိုးရဲ့သား ကောင်းဇင်ဟိန်းဟာ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖခင်မရှိတော့တဲ့ ရှဲဒိုးရဲ့ သားလေးအတွက် စေ့စပ်တောင်းရမ်းတဲ့ပွဲလေးကို သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲဘော်ရဲဘက် ကောင်းကျော်နဲ့အတူ ဝိုင်းချစ်၊ထက်ထက် တို့က ရှဲဒိုးကိုယ်စား သွားရောက် တောင်းရမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ သိပ်ချစ်ရတဲ့ တမလွန်က သူငယ်ချင်းရှဲဒိုးအတွက် စာလေးတစ်စောင်ပါ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ တမလွန်က သူငယ်ချင်း ရှဲဒိုး ???ဒီနေ့ မင်းရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားလေးကောင်းဇင်ဟိန်းရဲ့ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့ သူချစ်တဲ့ ချစ်သူလေးကို စေ့စပ် တောင်းရမ်းတဲ့ ပွဲလေးကို မင်းကိုသိပ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ မင်းကိုယ်စား မင်းသားလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင် သွားပြီး စေ့စပ် တောင်းရမ်းပေးခဲ့တယ်နော် သူငယ်ချင်း ????
တို့အထဲက အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းကတော့ ရုတ်တစ်ရက် ဖျော်ဖြေရေးပေါ်လာလို့ မလိုက်ပါနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ကွာ မင်းရဲ့ကိုယ်စား မင်းရဲ့ သား ငါတို့ရဲ့ သား ကောင်းဇင်းဟိန်းအတွက် ငါတို့ တတ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ်ပေးတယ်နော်သူငယ်ချင်း ?????
ဒီပွဲမှာ ငါတို့ မင်္ဂလာစကားပြောနေတော့ မင်းသိပ်ချစ်တဲ့ မင်းမိန်းမ သက်မွန်ညွန့် ခေါ် မလှလှညွှန့် မင်းကိုသတိရပြီး မျက်ရည်တွေ ကျနေတာမြင်ရတော့ ငါတို့ပါမျက်ရည်မကျမိအောင် ထိန်းခဲ့ရတယ်သူငယ်ချင်းရယ် ???? 10-11-2019 နေ့မှာ မင်းရဲ့သား မင်္ဂလာဆောင်မှာနော် သူငယ်ချင်း အဲ့ဒီရက်မှာ ပွဲတွေ အသီးသီးရှိနေကြလို့ ငါတို့ လာနိုင်ချင်မှ လာနိုင်မယ်သူငယ်ချင်းရေ မင်းကို ကြိုပြီးတောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ် ?????
အခုလဲ ငါတို့လုပ်ပေးနိုင်တာလေးကို မရှိတော့တဲ့သူငယ်ချင်းအတွက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်သူငယ်ချင်း ရွှေညီကိုအဖွဲ့ရဲ့ ရွှေညီအမ တွေပါ ပါဝင်ပေးခဲ့တယ်နော် သူငယ်ချင်း တမလွန်က အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ရှဲဒို (ခ)လှမြင့် (ခ)သာကျော်(ခ)ကျော်ဆန်း ကျေနပ် ဝမ်းမြောက်ပါသူငယ်ချင်းရေ
လူတွေ၊ ပရိသတ်တွေကို စိတ်ညစ်စရာ အခြေအနေတွေကနေ သူတတ်မြောက်ထားတဲ့ ဟာသပညာရပ်နဲ့ ပျော်ရွှင်စေခဲ့သူ၊ စိတ်အပန်းပြေစေခဲ့သူ ကောင်းရာဘုံဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတာတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။
“Box No.88” red carpet show မှာ မြင်သူတကာငေးရလောက်အောင် လှနေခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
ချစ်စနိုးဦးရဲ့မင်္ဂလာညစာစားပွဲကို အတူတွဲပြီးတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ဟိန်းဝေယံနဲ့ စွဲညို့ရှင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်
ကြည့်ရှုသူ(၃)သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မေလသံစဉ်နဲ့ အုပ်စိုးခန့်တို့ရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယိုဖိုင်
February 22, 2020 February 22, 2020 Cele Family
အသက်(၃၀) ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မိစန္ဒီ
June 12, 2020 Cele Family